Iji tinye ezigbo ngwa maka IUT, ịchọrọ oge, echiche, na ndụmọdụ dị mma… Anyị na-atụ aro ka ịkwalite faịlụ gị site n'ịgbaso izu 4 nke mooc a, na ọnụego nkeji 30 kwa izu.
Emebere ya ka o kwekọọ na mkpa niile: ị nwere ike imeju onwe gị nkeji iri atọ kwa izu, ma ọ bụ tinyekwuo oge n'ebe ahụ; ị nwere ike ilele naanị vidiyo ma mee ma ọ bụ mee ihe omume na ajụjụ ndị enyere; anyị nwere ike iji ya na-aga na-ekwurịta na forums na ndị ọzọ na-aga ime, na ụmụ akwụkwọ na-ama na IUT, ma ọ bụ ọbụna ịjụ ajụjụ ndị nkụzi, ndị niile bụ akụkụ nke anyị moderation otu.
Na nkenke, onye ọ bụla nwere ike ịme usoro nke aka ya na MOOC, ma jiri ya dị ka ọzụzụ a na-akwa akwa ma ọ bụ dịka nnukwu JPO.
Ịbanye IUT: Koodu iji kwalite faịlụ gị Ọnwa Iri na Abụọ 17, 2021Tranquillus
GỤỌ Free Excel: otu esi emepụta otu ọhụụ?
gara agaEco, maka onye, ​​maka gịnị?
-esonụỌzụzụ mmụta na agụmakwụkwọ ka elu
Onye na-eto eto 1, 1 ngwọta ngwọta na-emeju ya na ngalaba nke a raara nye Europe